Ku saabsan Mareykanka - Chapman Technology Co., Ltd.
Ku soo DHAWOOW Abuuraha Chapman shirkadda, Waxaa la aasaasay sanadkii 2008. Waxaan haynaa shahaadada SGS iyo nidaamka maaraynta tayada ee ISO 9001.
Waxaan diiradda saareynaa horumarka balaastigga balaastigga; wax taaj oo kale oo qaro weyn oo wax taaj oo kale ah, wax taaj oo kale oo dulqaad leh, LIS wax taaj oo kale, horumarinta wax soo saarka cusub iyo shirkii. Waxaan u adeegnaa dhowr suuq oo ay ka mid yihiin Warshadaha, Gawaarida, Caafimaadka, elektaroniga, difaaca, gaadiidka iyo macaamiisha. Waxaan si isdaba joog ah uga badinaa rajada macmiilkayaga anagoo xoojinayna dhamaan asxaabta lana abuuro dhaqan isku duubnaada hagaajinta, soosaarida caatada ah iyo iskaashiga silsiladda si loo hubiyo qiimaha ugu badan ee macaamiisheena.
Caaryada, Chapman Maker wuxuu ku takhasusay naqshadeynta iyo soo saarista dhammaan noocyada caaryada caagga ah ee HASCO, DME, LKM, MISUMI istaandarka leh falanqaynta socodka caaryada. Waxaan u siineynaa DFM macaamiisha 2 maalmood gudahood dhismaha caaryada oo leh hufnaan sare. Waxaan ku siineynaa macaamiil tayo fiican leh iyo adeegga ugu fiican warbixin toddobaadle ah oo ku saabsan habka wax soo saarka.
Goobta horumarinta alaabada, Aynu fikirkaaga ka dhigno wax soo saar la taaban karo oo suuq leh. Waxaan leenahay xamaasad xalinta dhibaatooyinka iyada oo loo marayo falanqeyn dhammaystiran iyo naqshad feker leh. Iyada oo injineernimada, naqshadeynta, barnaamijyada, iyo wax soo saarka gudaha, ma jiraan wax aan sameyn karin.
Abuuraha Chapmanwaxay leedahay awood hoose oo lagama maarmaan u ah inay ku dhammaystirto mashaariicda jadwalka, xirfadda loo dejiyey inay wax ka qabato inta badan geeddi-socodka horumarka sida loogu baahan yahay, iyo hal-abuurnimo xal loogu helo dhibaatooyinka ugu adag. Marka la isku daro naqshadeynta iyo injineernimada, waxaan qaadaneynaa fikrado dheeraad ah, si deg deg ah, macaamiishayada waxaan siineynaa macaamiil ay wataan, nashqadeyn maskax-soosaarid jadwallo adag.
Fikirkayaga weyn ee fikirka ahi wuxuu ujeeddooyinkaaga ka dhigayaa xagga hore iyo xarunta. Waxaan ka caawinnaa macaamiisheenna inay naqshadeeyaan oo keenaan khibradaha suuqa ee xoojiya astaantooda kana sii gudbaya baahida macaamiisha Isdhexgalka waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid kuqasban heer jireed iyo mid shucuureed waana xaqiijinta balan qaadka macaamiisheena Ujeedkeenu wuxuu ku wajahan yahay ujeedooyinka dhamaadka macmiilkeena. Hadday yihiin yoolalka ganacsiga, himilooyinka calaamadaha, ama jadwalka yoolalka waxaan si iskaashi leh ula shaqeynaa macaamiisheenna si aan u gaarno.
Waxaan macaamiisha u fidinaa adeeg hal-joogsi ah hal-abuurnimo heer sare ah, qaabeynta, injineernimada, waxsoosaarka iyo awoodda maaraynta tayada iyo qiimaha tartanka.
"Abuuritaanka qiimaha macaamiisha iyo kaamil ahaanta" waa falsafadeena. Waxaad ku ogaan doontaa faa iidooyin badan adoo isla shaqeynaya Abuuraha Chapman!